चितवनमा भेटिए पट्टु बाबा, पहिले कुलतमा फसे अहिले र्याप गाउन कम्मर कसे ! यस्तो छ कला - Enepalese.com
चितवनमा भेटिए पट्टु बाबा, पहिले कुलतमा फसे अहिले र्याप गाउन कम्मर कसे ! यस्तो छ कला
इनेप्लिज २०७६ असार १८ गते ०:४९ मा प्रकाशित
दाङ तुलसीपुरका सौगात देवकोटा अहिले चितवनमा पढ्दैछन् । साथीको संगतले केहि समय कुलतमा फसेका उनि अहिले केहि गरेर देखाउने योजनाका साथ जिन्दगीको गाडी हाँकी रहेका छन् ।
पछिल्लो साय युवा पुस्तामा लोकप्रिय र्याप गित गाउन रुचाउने सौगातलाई साथीभाई ले पट्टु बाबा भनेर चिन्दा रहेछन् । सौगातले आफ्नै युट्युब च्यानलमा आफ्ना केहि गित हरु पनि अपलोड गरेका छन् ।
सौगातले र्यापमा अश्लिल शब्द जरुरी नरहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो कला दर्शकमाझ देखाएर प्रतिक्रियामो आशा गरेको बताएका छन् । जिवनको भोगाईमा जिवनलाई संघर्ष हो भनेर बुझेका सौगातले संघर्ष गर्न नडराउने बताएका छन् । हेर्नुहोस सौगातसंग गरिएको यो मिठो कुराकानी